Susa i-moles kunye nokusilela kwesikhumba ngeAdobe Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Susa i-moles kunye nokusilela kwesikhumba ngeAdobe Photoshop Kuyinto eluncedo kakhulu ukuba sinokuyisebenzisa kuzo zonke ezo foto apho sibona ukuba uhlobo oluthile lwesiphene luye lwangena esikhumbeni. Isenokuba yifayile ye- isiva, isikhonkwane izangqa ezimnyama kobusuku ngaphandle okanye naluphi na uhlobo lokungafezeki esikubona eluswini.
Photoshop yiyo Isixhobo ngokugqwesa esetyenziselwa ukuphinda ubambe ifoto ye ifashoni kunye nentengiso, Ukulawula ezi ntlobo zezixhobo kuya kusinceda ngokuthe chu ukungena kwindlela abaqeqeshi kwicandelo abasebenza ngayo.
Photoshop sisixhobo somlingo esiya kusinceda lungisa zonke iintlobo zeempazamo kwiifoto zethu ngendlela elula kwaye intofontofo, kwimizuzu nje embalwa uya kuyifumana susa naluphi na uhlobo lwesiphoso esikubonayo eluswini. Isixhobo se-quintessential sokulungisa ezi ntlobo zeempazamo ngokulula nangokukhawuleza yi Isixhobo sepatch, esi sixhobo siyasivumela khetha indawo (ochaphazelekayo yimpazamo ethile) kunye yincamathisele kwenye indawo engenazimpazamo, ngokuzenzekelayo inwebu yolusu iyalungiswa.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile vula umfanekiso kwi-Photoshop. Nje ukuba ifoto ivulwe kwi-Photoshop, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukukhetha ifayile ye- Isixhobo sepatch.
Senza Ukukhetha indawo esifuna ukuyilungisa Ngesixhobo sepatch, emva koko sirhuqa ukhetho wenze indawo engenazimpazamo. Phezulu kwimenyu yezixhobo zepatch esiyifumanayo iindlela ezimbini: imvelaphi nendawo ekuyiwa kuyo, olu khetho lusivumela lungisa iimpazamo okanye uziphinde. Kule meko siza kusebenzisa indawo ekuyiwa kuyo ukukopa inxenye ngaphandle kokungaphumeleli kwindawo ekhethiweyo.
Phantse ngokuzenzekelayo sikwazile ukususa iimpazamo kulusu ngoncedo lweFotohop. Esi sixhobo sisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yefashoni kunye nentengiso ukuphelisa zonke iimpazamo ezinokubakho kwiimodeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Susa i-moles kunye nokusilela kwesikhumba ngeAdobe Photoshop
I-PixTeller sisixhobo sasimahla esiza kukunceda uyile imifanekiso yenethiwekhi yakho